SomaliaReport: NATO oo Hobyo Agteeda Ku Dishay 6 B/Badeed
Magaalada Hobyo dadka ku nool ayaa sheegay in lix qof oo looga shakisnaa budhcad-badeednimo arbacadii la dilay ka dib markii ciidamada shisheeye ee ceegaaga badda ay rasaas ku fureen doon maalin ka hor soo gaadhay meeshaas.
Inkasta oo aan horay loo ogayn cidda ay yihiin ciidamadan shisheeye ayaa haddana war ay gaashaanbuurta NATO soo saartay ku sheegtay inay ciidamadeedu fureen rasaas jawaab celin u ahayd mid kaga imanaysay xagga doonta.
Sheekh Daa’uud Sheekh Aadan oo ka mid ah duwayda magaalada ayaa wargayska Somalia Report ku yidhi “ugu yaraan lix budhcad-badeed baa dhintay ilaa shan kalena waa ku dhaawacmeen ka dib markii ay kooxdan budhcad badeedda ah ay rasaas ku fureen diyaaradaha qumaatiga u kaca oo iyadu ugu jawaabtay qoryaha darandooriga u dhaca, weerarku wuxuu ka dhacay meel afar mile kaga began magaalada dhanka waqooyi, weerarkana waxaa laga maqlayey dhanka bari ee magaalada Hobyo”.
Adan ayaa yidhi dad ka mid ah shacabka deegaanka ayaa ku eedeeyey inay diyaaraddu dishay dad kaluumaysato ahaa balse waxaan arkay mid ka mid ah dadkii dhaawaca ahaa waxaanan aaminsanahay inuu ahaa budhcad badeed. Mid ka mid ah budhcad badeeda deegaanka ayaa sheegay inay koxdan la laayey dhawaan ka yimaaddeen xaafad ka tirsan Mudug.
Nawaaxiga Hobyo ilaa waqooyi ayaa si aan caadi ahayn waxaa uga jira socod diyaarad iyo mid markab oo badan, wargayska Somalia Report oo soo indho-indheeyey goobta ayaa xaqiiyey inay jiraan ugu yaraa ilaa afar markab oo sugaya madaxfurasho ka dib markii la sii daayey VLCC Irene SL iyo MV Asphalt Venture.
NATO ayaa sheegtay in ciidamadii Danishka ahaa ee saarnaa markabka dagaalka ee loo yaqaan HDMS Esbern Snare, qaybna ka ah midawga ciidamada NATO ee ka hortagga budhcad badeedda, ay arkeen doon ka mid ah kuwa lagu yaqaab B/badeedda oo sii xambaarsanayd doon kale una sii galbinaysay dhul-xeebeed lagu yaqaan inay joogaan B/badeeddu. Rakaabkii saarnaa doonta la jiidayey ayaa alaab ay wateen ku tuuray doonta kale ka dibna sii fuulay.
“Si lama fil;aan ah ayey kooxdan looga shakisanaa B/badeednimadu rasaas ugu fureen ciidamadii NATO”. Markii uu markabka HDMS uu rasaas is difaacis ah ku furay B/badeedda ayey gacmaha madaxa sarateen sidii inay is dhiibayaan, ciidamadu markay ku soo dhawaadeena, qaar ka mid ah B/badeedda ayaa rasaas mar kale ku furay” NATO ayaa sidaa sheegtay.
Ciidankii fuushanayd markabka HDMS ayaa dib u gurtay si ay ul;a socdaan dhaqdhaqaana B/badeedda oo markaa ku noqday xeebta, waxaana markiiba meeshay doontu ku xidhnayd si dhaqso ah ku soo gaadhay gaadhi nooca 4x4 ka ah.
Ilo-wareedyada xagga badaha ayaa markii hore qabay in markabka Indian navy-ga oo lagu yaqaan qaabka adage e uu ula dhaqmo B/badeedda uu ku lug lahaa falkan, waxaase si adag u beeniyey DK Sharma oo ah ku sii simaha afheeynka Indian Navvy-ga. Xilliga iyo meesha weerarku ka dhacay ayaa ku soo beegmay xilli ay Indian navy-gu warsaxaafadeed ka soo saareen in mid ka mid ah maraakiibtooda dagaal loo diray inuu sooo badbaadiyo markab lagaga qafaashay goobtii ore ee MV Asphalt Venture. 15kii Apriil ayaa madaxfurasho gaadhaysa 3.5 milliyan la bixiyey. Balse shaqaalihii markabkan ayaa loo kexeeyey dhanka xeebta markuu markabku sii shiraacday, in yar ka dibna cillado farsameed ayaa la soo gudbonaaday markabka.
Lama oga inay shaqaalihii hadhsanaa ee Hindida ahaa lagu celiyey markabka iyo inay wali ku sugan yihiin dhulka. Magaalada ugu dhaw ayaa ah Hobyo, socodka xagga badda ahna waa midka ugu wanaagsan. B/badeedda aaggaa ku sugan ayaa waxaa korka kala socda ciidamada shisheeye ee badda, kuwaasoo la wargaliyey markii ay madaxfurashadii MV Asphalt fashilantay.
Dadka deegaanka Hobyo ayaa ku qasbay inay B/badeeddu kala fogaadaan maraakiibta ay qafaashaan iyo maxaabiistooda iyag oo ka baqaya in haddii la isku dayo in dadkaa xog lagu badbaadiyo ay galaafan karto maatida magaalada ku nool.